Ukuguqulwa kwemali, amazinga wokushintshaniswa
Currency Converter - ukuguqulwa inthanethi of yiluphi uhlobo lwemali zwe aye esilinganisweni sanamuhla. Ideshibhodi yakho siqu ngezinga lokushintshanisa namashadi wamanani azo zonke zezimali zezwe. 173 zemali idatha yangempela-time.
Ihora Usuku Iviki Inyanga izinyanga 3 Unyaka Iminyaka emithathu Iminyaka engu-10
USD - US dollar EUR - Euro GBP - okokuphrinta JPY - Yen CNY - yuan RUB - Ruble Russian AUD - Aussie dollar AZN - Manat Azerbaijani ALL - Lek Albanian DZD - Dinar Algeria XCD - Dollar East Caribbean AOA - Kwanza MOP - Pataca Macanese ARS - Peso Argentine AMD - Dram-Armenian AWG - Florin UmAruba AFN - Afghani Afghan BSD - Dollar Bahamian BDT - Bangladesh Taka BBD - Barbados dollar BHD - Bahrain dinar BYR - Ruble Belarusian BYN - Ruble Belarusian BZD - Belize dollar XOF - CFC franc BMD - Bermuda dollar BGN - Lev Bulgarian BOB - Boliviano saseBolivia BAM - Bosnia and Herzegovina uphawu convertible BWP - Botswana Pula BRL - Brazilian real BND - Brunei dollar SGD - Singapore dollar BIF - Burundi franc BTN - Bhutan Ngultrum INR - Rupee Indian VUV - Vanuatu Vatu HUF - Forint Hungarian VEF - WaseVenezuela Bolivar fuerte VND - Vietnamesse dong XAF - CFC franc HTG - Gourde Haitian GYD - Guyana dollar GMD - Gambian dalasi GHS - Ghana Cedi GTQ - Quetzal laseGuatemala GNF - Guinea franc GIP - Gibraltar ganda HKD - Hong Kong dollar HNL - Hondura Lempira GEL - Lari Georgian DKK - Umqhele Danish DJF - Djibouti franc DOP - Dominican peso EGP - Ganda Egyptian ZMW - Zambian Kwacha MAD - Dirham Moroccan ZWD - Dollar Zimbabwean ILS - Israeli yeshekeli entsha IDR - URupiah Indonesian JOD - Jordan dinar IQD - Iraqi Dinar IRR - Rial Iranian ISK - Iceland krone YER - Rial Yemeni CVE - Cape Verde Escudo KZT - Kazakhstani Tenge KYD - Cayman Islands dollar KHR - Riel Cambodian CAD - Dollar Canadian QAR - Riyal Qatari KES - Kenya usheleni COP - Peso Colombian KMF - Franc Comoran CDF - Franc Congolese KPW - North Won Korean KRW - Won South Korean RSD - Dinar Serbian CRC - Costa Rica colon CUP - Peso Cuban KWD - Dinar Kuwaiti NZD - New Zealand dollar KGS - Som Kyrgyzstani LAK - Lao Kip LVL - Latvian lat LSL - Lilangeni ZAR - Rand LRD - Liberia dollar LBP - Ganda Lebanese LYD - Dinar waseLibya LTL - Litas Lithuanian CHF - Franc Swiss MUR - Mauritius Rupee MRO - Ouguiya Mauritanian MGA - Ariary Malagasy MKD - Denar Macedonian MWK - Malawi Kwacha MYR - Malaysin Ringgit MVR - Rufiyana Maldivian MXN - Peso Mexican MZN - Metical waseMozambique MDL - Leu baseMoldova MNT - Tugrik-Mongolian MMK - Kyat Burmese NAD - Dollar Namibian NPR - Rupee Nepalese NGN - Naira Nigerian ANG - Gulden Antilliaanse NIO - Cordoba baseNicaragua XPF - French Pacific franc NOK - Krone Norwegian AED - UAE Dirham OMR - Rial Omani SHP - Saint Helena ganda PKR - Pakistan Rupee PAB - Balboa Panamanian PGK - kina PYG - Guarani PEN - Peruvian Nuevo Sol PLN - Zloty Polish RWF - Franc baseRwanda RON - Leu Romanian XDR - SDR (Special drawing amalungelo) SVC - Ikholoni El Salvador WST - Tala STD - São Tomé and Príncipe Dobra SAR - Riyal Saudi SZL - Lilangeni TRY - New Turkish lira SCR - Seychelles Rupee SYP - Ganda Syrian SKK - Slovak koruna SBD - Solomon Islands dollar SOS - Usheleni waseSomali SDG - Ganda Sudanese SRD - NaseSurinam dollar SLL - Leone TJS - Somoni Tajikistani THB - Baht Thai TWD - Dollar entsha Taiwan TZS - Usheleni Tanzanian TOP - pa`anga TTD - Trinidad and Tobago dollar TND - Dinar Tunisian TMM - Turkmenistan manat TMT - Turkmenistan manat entsha UGX - Uganda usheleni UZS - Uzbekistan sum UAH - hryvnia UYU - Peso Uruguay FJD - Fiji dollar PHP - Philippines peso FKP - Falkland Islands ganda HRK - Kuna Croatian CZK - Koruna Czech CLP - Peso Chilean SEK - Krona Swedish LKR - Sri Lanka Rupee ERN - Nakfa ETB - Ethiopian Birr JMD - Dollar Jamaican SSP - Ganda South Sudanese BTC - Bitcoin CLF - BaseChile Unidad de Fomento EEK - Kroon Estonian GGP - Guernsey ganda IMP - Manx ganda JEP - Jersey ganda MTL - Lira Maltese XAG - I-Troy ounce yesiliva XAU - Igolide elilodwa le-Troy / igolide electronic) ZMK - Zambian Kwacha ZWL - IZimbabwe dollar ATS - Usheleni Austrian AON - Angolan Kwanza entsha BEF - Franc Belgian GRD - Lwesiliva Greek IEP - Ganda Irish ESP - Peseta Spanish ITL - Lire Italian CYP - Cyprus ganda DEM - Deutsche mark NLG - Netherlands Guilder PTE - Escudo Portuguese SIT - Tolar Slovenian SRG - NaseSurinam Guilder FIM - Uphawu Fin FRF - France frank ECU - ECU YUM - Yugoslavian dinar entsha
USD = 73.15 ZAR
US dollar ishadi elibukhoma lentengo
EUR = 86.81 ZAR
Euro ishadi elibukhoma lentengo
GBP = 101.71 ZAR
Okokuphrinta ishadi elibukhoma lentengo
JPY = 0.67 ZAR
Yen ishadi elibukhoma lentengo
CNY = 11.32 ZAR
Yuan ishadi elibukhoma lentengo
Imali Converter uqaphe nsuku exchange angaphandle amazinga e Central Banks for 173 zezimali.
Forex rates online, bukhoma lwemali exchange
Live forex exchange rate ngaso 01 August 2021
Amanani wokushintshwa kwemali yemlando, amashadi womlando.
Isiguquli Semali sibonisa isilinganiso samanje sokushintshana kwanoma iyiphi imali ekhethiwe yanamuhla. Amanani wokushintshwa asetwa ngamabhange kazwelonke futhi enza isisekelo sokunquma amanani okushintshana ngamanani okushintshana kwemali namabhange okuhweba. Ungalandela isilinganiso sokushintshwa kwebhange likazwelonke ukuthola izinga lokushintshana elingcono kakhulu lokuthenga nokuthengisa imali.
Isiguquli semali kwiwebhusayithi yethu futhi sikhombisa izinga lokushintshanisa on the Forex exchange. Izinga le-Forex libuyekeza njalo ngemizuzwana engama-30. Bona izinga lokushintshwa kwe-inthanethi mahhala futhi manje ngesikhathi sangempela.
Izinga lemali ekushintshanisweni kwe-Forex lisethwa njalo ngemuva kwamasekhondi, kuqhathaniswa nezinga lemali likazwelonke elibekwe yibhange likazwelonke kanye ngosuku.
Sihlala sibheka amanani ezimali ezingama-173, ekushintshanisweni kwezentengiso kanye namanani asemthethweni kahulumeni. Ungabuka mahhala inani lokushintshana kwanoma iyiphi imali efana nenye.
Ungalandela umkhondo wesilinganiso sokushintshaniswa kohlobo lwemali olulodwa kuya kolunye usebenzisa le paneli yomuntu siqu. Izinga lokushintshaniswa liboniswa ngesimo samagrafu nezinombolo, izinguquko zamanani ziboniswa enkampanini ehlukile njengephesenti. Ukuphakama kanye nokwehla kwezinga lemali kukhonjiswa ngemibala ehlukene.
Izinga Elishintshashintshayo Elilingana Nemali
Izinga lokushintshwa okungcono kakhulu lingalandelelwa ngamagrafu wezinguquko ezisheshayo ezilinganisweni zokushintshaniswa kwamapaneli wesayithi noma amakhasi wesilinganiso sokushintshwa kwemali ngo-inthanethi kusuka ekushintshanisweni kwe-Forex. Enye indlela yokulandela isilinganiso esihle kakhulu ukubona njalo ushintsho lwemali ekhethiwe, futhi lapho ishadi lesilinganiso semali libonisa inani eliphansi, lesi isikhathi esihle kakhulu sokuthenga, futhi lapho ubukhulu bukuthengisa imali.
Rand lanamuhla imininingwane eyisisekelo esetshenziswa ngabantu abaningi. Ungathola isikhulu Rand isilinganiso sokushintshaniswa sanamuhla kunoma iyiphi imali yomhlaba kwiwebhusayithi yethu.
Sibheka isilinganiso sokushintshana sazo zonke izinhlobo zezimali nsuku zonke futhi sazi izinga hhayi lanamhlanje kuphela, kodwa lazo zonke izinsuku kusukela ngo-1992.
Namuhla Rand isilinganiso sisethwe njengomphumela wokuhweba phakathi izolo. Ngokutadisha ushintsho ku- Rand isilinganiso sokushintshwa kwe-inthanethi izolo, ungabikezela inani lokushintshana elisemthethweni lwanamuhla.
Rand isilinganiso sokushintshwa kusasa
Rand lakusasa kwakhiwa yibhange likazwelonke ngesisekelo se Rand ukuhweba kuma-Forex nakwezinye izimakethe zokushintshana namuhla. Kusasa Rand yisisekelo sokushintshaniswa kwe Rand ebhange ku .
Ngakho-ke, ngokubheka ushintsho ku- Rand phakathi nesikhathi ekushintshanisweni kuwebhusayithi yethu, uzokwazi ukubikezela lokho Rand sekusasa futhi Rand izingcaphuno zokushintshana emabhange kusasa .
Setha Rand iphaneli yokulandelela ekhasini lasekhaya lewebhusayithi eguqula imali. Bona Rand isilinganiso sokushintshaniswa online, futhi uzohlala uqagela ngokunembile Rand isilinganiso sokushintshaniswa kusasa.
Izinga lokushintshana le Rand ngokumelene nedola namuhla
Rand yokushintshaniswa kwedola namuhla yinto ehamba phambili Rand isilinganiso sokushintshana emakethe yomhlaba. Inani lokushintshana le Rand ngokumelene nedola elinquma inani lokushintshana le Rand ngokumelene nezinye imali.
Ungabona isikhulu Rand kuya ku-dollar rate rate ebekwe yibhange likahulumeni lwanamuhla futhi Rand kuya ku-dollar rate kwi-Forex exchange online .
Izinga lokushintshana le Rand ngokumelene ne-euro namuhla
Izinga lokushintshana le Rand ngokumelene ne-euro yanamuhla kwethulwe kuwebhusayithi moneyratestoday.com kuzinguqulo ezimbili:
isikhulu isilinganiso sokushintshana Rand ukuya ku-euro ebekwe yibhange likahulumeni lwanamuhla futhi
isilinganiso sokushintshaniswa kwe Rand kuya ku-euro ekushintshanisweni kwe-Forex online
Rand ukuqhathanisa ne-euro njengenye yezimali ezinkulu emhlabeni ezinqumayo Rand isilinganiso sokushintshana ngokumelene nezinye zezimali zomhlaba. Ithrekhi Rand izinga lokushintshaniswa kwanamuhla kudeshibhodi online yewebhusayithi yethu.
Isiguquli Semali Rand online
Isiguquli Semali Rand online kuwebhusayithi yethu ikuvumela ukuba uthole Rand isilinganiso sokushintshaniswa kunoma iyiphi imali yomhlaba. Silandelela nsuku zonke Rand kuya kwezinye izinhlobo zezimali zomhlaba eziyi-172.
Ukuguqula Rand ngokunenzuzo kwenye imali emabhange, landelani Rand isilinganiso sokushintshwa usebenzisa amawijethi ethu aku-inthanethi.
Imali yokuguqula idola online
Imali yokuguqula idola online ikulayini yokushintshaniswa kwensiza ye-inthanethi kuzo zonke zezimali zomhlaba kubandakanya Rand. Ungaqapha ukuguqulwa kwedola:
kumawijethi enziwe ngezifiso ku-moneyratestoday.com
ku Izinga lokushintshwa ledola elisemthethweni insiza
ekhasini le isilinganiso sokuguqulwa sedola ekushintshanisweni kwe-intanethi online
Isiguquli sedola sisebenza nanoma yiziphi zezimali zomhlaba eziyi-172. Sibonisa izinga lokushintshwa kwedola lanamuhla nomlando wokuguqulwa kwamadola nsuku zonke eminyakeni engama-30 edlule.
Converter Euro lwemali online
I-Converter Converter ye-Euro online - insiza ye-inthanethi ye-Euro kuma-worldrens emhlabeni. Isiguquli semali yase-inthanethi online sifaka Rand ukuze iguqulwe i-euro.
Izinga lokushintshwa kwe-Euro kuwebhusayithi yeZimali Zokubuka lingabukwa ku-inthanethi kulezi zibalo:
kumawijethi omuntu ku-moneyratestoday.com
ekhasini lesikhulu Izinga lokuguqulwa kwe-Euro
enkonzweni online, the isilinganiso sokushintshwa kwe-euro ekushintshanisweni kwe-intanethi online
Isiguquli se-euro sikhombisa izinga lokushintshaniswa kunoma yiziphi zezimali zomhlaba eziyi-172. Sinesilinganiso sokuguqulwa kwe-euro sanamuhla nomlando wokuguqulwa kwansuku zonke kwe-euro kule minyaka engama-30 edlule.
Idola ukuya ku-Rand Converter yemali online
Dollar ukuze Rand Converter lwemali online - Rand service rate rate on the Forex exchange.
Uyabona Rand isilinganiso sokushintshwa mahhala ngesilinganiso sokushintshaniswa esibuyekeziwe njalo ngemizuzwana engama-30.
Rand kuya ku-dollar rate rate lingabukwa zombili ngomzuzu wokugcina, nangehora, nangosuku.
Umlando we Rand kuya ku-dollar rate kugcinwe ku-database yethu kusukela ngo-1991. Bona nsuku zonke Rand / isilinganiso sokushintshwa kwedola nsuku zonke.
I-Euro kuya Rand Converter yemali online
Euro ukuze Rand Converter lwemali online - ikhasi le Rand isilinganiso sokushintshanisa on the Forex exchange.
Rand ngokumelene ne-euro ivuselelwa amahlandla ama-2 ngomzuzu ongu-1.
Rand kuya ku-euro rate rate ingabukwa womabili ngomzuzu wokugcina, nangehora, nangosuku.
Umlando we Rand ku-euro ne-euro kuya Rand amanani okushintshana abekhona kusayithi kusukela ngo-1992. Izinga lokushintshana likhona emphakathini mahhala nsuku zonke.
Isiguquli semali ye-Bitcoin online, isilinganiso se-bitcoin sanamuhla
Isiguquli semali ye-Bitcoin online asikhonjisiwe kwiwebhusayithi yethu. I-Moneyratestoday.com ilandelela kuphela imali esemthethweni.
Kodwa isilinganiso sokushintshaniswa kweBitcoin sanamuhla imininingwane ebaluleke kakhulu yendawo ye-crypto.
Lapha ungabona I-Bitcoin exchange rate yanamuhla .
Isiguquli se-Cryptocurrency online, isilinganiso se-cryptocurrency
Isiguquli esiku-inthanethi se-cryptocurrency singabukwa nakwisixhumanisi esingezansi.
Amanani wokushintshana angaphezu kwe-2000 crypto alandelwa ku-inthanethi esizeni somlingani wethu.
Manje i-crypto iyaqala ukuthandwa futhi ingahle ibe yingxenye yedola, i-euro kanye nezinye imali zezwe.